Moments leh saaxiibo 28
Ma nahay ama ma waxaan ku jirnaa ururada atma-buddhi?
Ma nihin. Su'aashu waa mid guud oo mugdi ah, waxayna qaadanaysaa ilaa xad in aan ognahay dhammaan arrimaha ku saleysan. Waxyaabaha jira waa atma iyo buddhi kuwaasoo "annagu" nahay ama aan ahayn "inagoo ku jirna." Su'aasha waxaa sida muuqata laga waydiiyay dhinaca aragti ahaaneed. Atma waxaa loo sheegaa inay tahay ruuxa miyir qabka ah ee dunidan wax walba ku xadgudbaya. Buddhi waxaa la sheegaa inuu yahay nafta ruuxiga ah, waana baabuurta atma, taasina ay ku kacayso atma. "Annaga" waxaa la yiraahdaa waxaan nahay maskax maskax ahaan shaqsiyeed. “Union” waa dowlad ay mid ama in ka badan ku biirto ama ku qasmaan midba midka kale. Atma ruuxda guud ee miyir-qabka ah iyo gaadiidkeeda, ayaa had iyo jeer ku jira ururka; maxaa yeelay waxay si isuduwid ah ula dhaqmaan waqti kasta oo ay buddhi ka warqabaan atma labada kalena waa ay ku midoobaan. Waxaa sidaas loo oran karaa waa mid mideysan oo caqiido guud ah. Si keli ah oo aan ula midowno asma-buddhi, waa inaan ogaadaa sida aniga oo kale waana inaan ogaadaa cida aan ahay; waa inay ogaataa shaqsiyadeeda iyo aqoonsigeeda sidoo kale waa inay ka digtoonaataa buddhi iyo atma, waana inay ogaataa in shaqsi ahaan ay ku soo biirtay, ku midoobeen, guud ahaan buddhi iyo atma. Marka shaqsi ahaanta aan ka warqabo aqoonsigiisa oo aan ka warqabo in uu yahay mid ka mid ah asaasiga guud ee caashaqa iyo buddhi markaa qofkaasi wuxuu si sax ah u dhihi karaa "wuxuu ku xiran yahay atma iyo buddhi." shaqsi ahaan waxa ay tahay atma iyo buddhi iyo waxaan nahay, iyo waxa midowgu yahay, maxaa yeelay qofkaasi wuu ogaan lahaa aqoontuna waxay ku dhamaan doontaa mala-awaalka. Xaaladda jirta ee ninka, "annagu" garan mayno cidda aannu nahay. Haddii aanaan garanaynin cidda aannu nahay annagu garan mayno cidda ama maxay buddhi iyo atma yihiin; iyo hadaan garanayn cidda aan nahay oo aannaan guud ahaan u wada niqiin, annagu ma nihin sida dad is og oo isku mid ah mabaadi'da guud ee miyir-qabka ee atma iyo buddhi. Midowga Afrika waa dhow yahay, diyaaraddaasna waxay ku xiran tahay wax xiriir ah oo lala yeesho wax mideysan. Qofka miyir qabka ahi runtii ma dhihi karo inuu ku midoobo ama ku midoobo waxkasta oo uusan sifiican uga warqabin, in kastoo wax kale ay la joogaan isaga. Atma iyo buddhi way la joogaan nin markasta laakiin ninku xitaa sidii qof naftiisa u garanaya ma garanayo ama kama warqabo Atma iyo buddhi inay yihiin mabaadii'da guud iyo tan ruuxiga. Sababta oo ah isagu ma ahan mid caalami ah oo miyir qabo iyo xitaa uusan xitaa ka warqabin aqoonsigiisa shaqsiyeed, sidaa darteed, isaga, nin, sida fikirka ah in uusan ku jirin midowga Atma-buddhi.
Ma runbaa in wax kasta oo aan noqon karno waa horey inoogu jirta, iyo in wax kasta oo aan samayno ay tahay inaan ka dhigno mid miyir leh?
Isku soo wada duuboo, taasi waa run, oo, waxaan u baahan nahay marka ugu horeysa inaan sameyno waa inaan ka feejignaano waxa nagu jira oo dhan. Tani waxay ku filan tahay waqtiga xaadirka ah. Markaa, laga yaabee, inaynu barano wax kasta oo inaga baxsan, ka dibna aragno farqiga u dhexeeya taas iyo waxa innaga dhex jira oo dhan.
Su'aasha ahaan bayaan ahaan waa mid debecsan oo sahlan sidii dabayl dabacsan xagaaga - iyo sidii aan xad lahayn. Haddii qofku naftiisa ku qanciyo su'aasha noocaas ah iyo jawaabta "haa" ama jawaab aan xadidneyn sida su'aasha, waxaa jiri doona faa iido yar oo laga soo qaado sida uu u imaan lahaa qof ka soo jeeda beeralleyda oo isagu naftiisa ka kooban fikirka ah in uu meel ku keydiyey. Nabdoon miraha dhammaan waxyaalaha koraya. Qof garanaya ama aaminsana inuu leeyahay wax walbaa oo suurtagal ah inuu noqdo ama wax ka ogaado, oo aan ku noqonin wax uu yaqaan, ayaa ka sii xun oo laga jecel yahay inuu ka naxariis badan yahay kan aan wax dabble ahayn. oo leh soo jeedin aan macquul ahayn laakiin yaa iskudaya uun inuu wanaajiyo xaaladiisa jireed ee hadda jirta. Wadamada bariga waa caadi in la maqlo kuwa caabuda oo ku celcelinaya luqadooda: “Anigu waxaan ahay Ilaah”! "Anigu waxaan ahay Ilaah"! "Anigu waxaan ahay Ilaah"! leh kalsooni fudud oo kalsooni badan. Laakiin iyagu waa Sida caadiga ah ilaahyadan waxay noqon lahaayeen kuwo tuugsanaya waddooyinka waxbana kama oga wax yar oo ku filan oo ay ku xaqiijinayaan; ama waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa aad wax u bartay oo awood u leh inay galaan doodaha dhaadheer ee taageeraya sheegashadooda. Laakiin in yar oo ka mid ah kuwa sheegta waxay caddeeyaan noloshooda iyo shaqadooda ay fahmayaan oo ay xaq u leeyihiin. Waxaan soo galnay xaqiijintaas oo ay la socdaan noocyo kala duwan oo ka mid ah adeegayaashan waxaana wali heleyno maraakiib cusub Mareykanka. Laakiin haddii ay ilaahyo yihiin, yaa raba inuu noqdo ilaah?
Way u wanaagsan tahay binu-aadmiga inay rumaystaan ​​in wax waliba isaga u suurtoobaan; laakiin waa munaafaqnimo isaga inuu isku dayo inuu naftiisa ka dhigto inuu rumeysan yahay inuu horay u gaadhay gobolkaas oo laga yaabo inuu meel fog ka dhaco. Farmasiiga sheybaarka shaybaadhkiisa, sawir-qaade joornaalkiisa, farshaxankiisa markabkiisa, ama milkilaha beertiisa, ayaa ah kuwo ilaahey-la mid ah oo ka badan kuwa socodka ku socda oo caajiska iyo qaddarka leh waxay caddeeyaan inay yihiin ilaah, maxaa yeelay ilaahnimadu waa gudaha iyaga. Waxaa la yiri: "Anigu waxaan ahay makarafoonka makrocosm." Run iyo wanaag. Laakiin waxaa wanaagsan inaad ficil samayso intii aad odhan lahayd.
In la garto ama la rumeeyo shay ayaa ah tillaabada ugu horreysa ee lagu gaadhayo. Laakiin in la rumeeysto wax la waayey ama aan la rumeysan karin ayaa ah. Markii aan aaminsanahay in wixii aan ku noqon karno oo dhan ay inaga dhex jiraan, waxaan uun ku baraarugnay aaminsanaantayada. Taasi kama warqabin waxa nagu jira. Waan ka warqabnaa waxyaabaha aan rumeysnahay annaga oo isku dayeynna in aan fahamno oo aan u shaqeyno iyaga dhinacaas. Iyadoo lagu hogaaminayo ujeedkeena iyo sida aan u shaqeeno waxaan ku baraarugsan nahay waxyaabaha nagu dhex jira oo aan gaarno himilooyinkayaga. Shaqadiisa kimistariga wuxuu keenaa inuu noqdo waxa uu u shaqeynayo si waafaqsan qaaciidooyinka. Sawir-qaadehu wuxuu ka dhigayaa muuqda mid ku habboon maskaxdiisa. Sculptor-ka ayaa sababay in sawirka maankiisa uu ka soo baxo marbiska. Beeraleydu waxay sababaan inay abuuraan waxyaalaha kuwa suurtagalka ku ahaa abuurka. In ninku waxkasta ku dhex jiro waa fikir rabbaani ah. Fikirkaani waa abuur suurto gal ah oo ilaahnimadiisa. Fikirkaan rabbaaniga ah waa lagu xadgudbay, waa lagu qoslay, waana lagu nijaasoobay markii si fudud loogu soo dhejiyo. Markii si fudud wax loogu afuufo afka oo aan innaba garanayn, sidii abuur iniinyay oo dhulka jabay, xidid ma yeelan doono. Qof garanaya qiimaha iyo damaca inuu beero abuur ma soo bandhigi doono, laakiin wuxuu gelin doonaa ciid ku habboon wuxuuna kobcin doonaa oo daryeelaa wixii ka soo baxa abuur. Midkasta oo si joogto ah u yiraahda inuu yahay ilaah, inuu yahay microcosm of macrocosm, inuu yahay Mithra, Brahm, ama Ilaah kale oo rasmi ah, wuxuu daaha ka qaadayaa oo uu afuufayaa abuur uu leeyahay ayna u badan tahay inuusan ka mid ahayn abuur ilaahnimadu xidid bay yeelan doontaa oo weynaadaa. Qofka dareemaya inuu yahay dooni Nuux run ah oo dareemaya rabitaan gudaha ah, wuxuu xurmo leeyahay oo kobcinayaa fikirka. Markii la kobciyo laguna hagaajiyo fikradihiisa iyo ficillada waafaqsan aaminsanaantiisa, wuxuu bixiyaa shuruudaha ku dhex jira kaas oo sirdoonka iyo ilaahnimadu si dabiici ah ugu koraan. Kadib wuxuu si tartiib tartiib ah u fahmi doonaa in wax walbaa ku jiraan isaga iyo inuu si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah uqushan ah uqiimeeyo.